Xa sizoba indlela kuGoogle Earth, kunokwenzeka ukuba ubone ukuphakama kwayo kwisicelo. Kodwa xa sikhuphela ifayile, izisa kuphela i-latitude kunye ne-longitude izilungelelaniso. Ubude buhlala bungu-zero. Kweli nqaku siza kubona indlela yokongeza kule…
ICartoDB yenye yezona zicelo zinomdla eziphuhliswe ukwenza iimephu ezinomtsalane kwi-intanethi ngexesha elifutshane kakhulu. Ifakwe kwiPostGIS kunye nePostgreSQL, ilungele ukusetyenziswa, yenye yezona zinto zibalaseleyo endizibonileyo...
ISuperGIS yinxalenye yemodeli yeSupergeo endithethe ngayo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ngempumelelo entle kwilizwekazi laseAsia. Emva kokuyizama, nantsi eminye yemibono endiyifumeneyo. Ngokubanzi, yenza phantse nantoni na enye…
Le mveliso isandula kunikezelwa kwiNkomfa yaBasebenzisi be-ESRI eSpain, kwiveki ephelileyo kwaye kule veki izayo baya kuba seTopCart eMadrid. Yindawo yeGPS kunye nenkqubo yokulinganisa ethi...
Le yiprojekthi enika umdla ephuhliswayo ngoku eHonduras, phantsi kwendlela yeBhasi yokuHamba ngokuKhawuleza (BTR). Nangona ngoku kukwelo nqanaba lokuqonda phambi kwabathwali abangenayo ingcaciso yendlela abavela ngayo ...
Lo ngumzekelo wendlela i-Excel inokuthumela ngayo umxholo kwiGoogle Earth. Imeko yile: Sinoluhlu lolungelelwaniso kwifomati yejografi yedesimali (lat/lon). Sifuna ukuthumela kuGoogle Earth, kwaye sifuna...
Makhe sibone imeko: Ndiye ebaleni ukuya kwakha ipropathi, njengoko kubonisiwe kwitheyibhile elandelayo kwaye ndifuna ukuyibona ngeso lengqondo kuGoogle Earth, kubandakanya neefoto ezimbalwa endizithathileyo.
Ukuphendula kwezinye iintandabuzo eziza kum, ndithatha ithuba lokushiya umphumo wokusetyenziswa koluntu. Ngexesha elidlulileyo ndathetha malunga nendlela onokufaka ngayo imifanekiso edibeneyo kwindawo yeGoogle Earth, nangona usebenzisa iidilesi zewebhu. Kule meko ndifuna ...